Ukuthenga igolide yokufuna ngentengo ukuhlabana okwesikhathi igremu zegolide amafa inzuzo esizayo. Yini odinga ukukwazi abantu abakhetha igolide njengendlela yokutshala imali ithuluzi? Yiziphi imithetho ukuthenga igolide amafa akhona?
Yiqiniso, operation ezinkulu njengoba ukuthenga igolide kungenzeka kuphela uma kukhona umazisi.
Thengisa indoda igolide ungakwazi ibhange - lena ukhetho best, njengoba ukuthenga gold bullion ebhange, engozini yokugetshengwa kuyehla kube cishe zero. Uhlu amabhange ezihlinzeka umsebenzi akuyona ikakhulukazi ezinkulu (Savings Bank, Absolut Bank, Uniastrum Bank, nomos-Bank), ngakho-ke kungumsebenzi wakho ukuze ufunde imininingwane yokufuna igolide (bullion zemali) kunoma iyiphi ebhange. Into ebaluleke kakhulu ukuba banake izinto ezimbili - noma ngabe kukhona ithuba ukuthenga ebhange wathenga umuntu ingot noma zemali, futhi ibaluleke ngani ukusabalala, okusho umehluko phakathi ukudayiswa kanye ukuthengwa igolide.
Ezinye izici ukuthengisa igolide e osebeni CIS amazwe angahluka. Isici zomthetho iyadingeka futhi lapho uthenga igolide. Kufanele athobele, efana ukuthenga nokuthengisa party. Zonke izici zomthetho zingatholakala ku amathuluzi efanele yezomthetho, eyasungulwa ngokuvumelana Isinqumo RF kaHulumeni. Lesi sinqumo lisho ngokucacile ukuthi ukudayiswa (ukuthenga) zegolide bullion kungenziwa kuphela kwenziwe khona umuntu oqhuba utshalomali ngegolide. Ngaphambi kokuba uthenge edingekayo izinqubo enesisindo, okuyinto zihloselwe sikhiphe nobe ngusiphi ezizathwini nokungaqiniseki. Cabanga ngokunembile 0.01, iBhange ubophekile ukuba unike umuntu imibhalo kusukela embonini, okuyinto uqinisekise umsuka ingots, kanye negolide equkethwe kuwo. Inqubo ukuthenga gold bullion ngaphezu kuhilela ukulungiselela yemali amathuluzi, okuyinto kufanele bakhombise intengo gold bullion, isisindo, inombolo nobumsulwa.
Uma umuntu anquma ukukwenza ukuthenga igolide ngezinhloso utshalomali, kufanele sikunake lokho isici kukhona bezigaxa zegolide, zemali noma amagugu okuhloba. Phela, kuyinto efiselekayo ukuthola umkhiqizo izinga, ngoba esikhathini esizayo kuyoba inzuzo kakhulu futhi kulula ukuthengisa. Uma ibha akanayo burrs, inclusions angaphandle, imihuzuko, scuffs, futhi ahlotshiswa ke imibhalo ehlanzekile lonke umenzi, kukhona zonke izizathu zokukholelwa ukuthi izimpahla zisesimweni esihle.
It kubhekwa isimo eyanelisayo ngaphezulu ingot ehlanganisa nezakhamuzi namabala, scuffs nokuklwebheka (akunamthelela isisindo ithonya), imibhalo ye umenzi overstrained noma embozwe izindawo, ezithinta yokufundwa kombhalo. Kulokhu, lo muntu unelungelo ukukhansela ukuthengwa igolide. Uma abantu onesibindi ukuvula i-akhawunti ebhange, ebhange ngegolide, palladium noma isiliva, kungenziwa kalula okukhulu.
Ukutshala imali ingcebo. Ukutshala imali ingcebo phesheya
Smart utshalomali - indlela wangempela yokuchuma ngokwezomnotho
Inqubomgomo Ikhredithi ngamabhange - ngesisekelo umsebenzi ngempumelelo emakethe yezimali.
Njengoba inqubomgomo idividendi lenkampani kusiza ukuheha abatshalizimali.
Iliquorice: izakhiwo zokwelapha kanye isicelo
Wmiprvse.exe - kuyini? Kuthiwani uma wokugaya umkhumbi wmiprvse.exe?
Synkineses - kungcono ... kwezimo ezivamile futhi sokugembula
Yini kuzobangela ukwanda dollar? ukukhula dollar: ngemiphumela
Ukuze kwezinye izindawo emfuleni iVolga: geography ngemvelo
Neminye eyingqayizivele nephumelelayo Vibroplatformy: Impendulo yomsebenzisi kuzosiza ukuqonda